विदेशीको फन्डिङमा अधिनायकवादको रटान : बिदेसीको मोहरा बन्दैछन डा केसी - Janata Times
विदेशीको फन्डिङमा अधिनायकवादको रटान : बिदेसीको मोहरा बन्दैछन डा केसी
तथ्यहरूले प्रष्टै भनिरहेको छ, डाक्टर गोविन्द केसीको योजना चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार होइन, भिजिटर प्रोफेसरका नाममा बोलाउने विदेशी मेडिकल कलेजका सञ्चालक पोस्नु हो, नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी मेडिकल कलेजमा महँगो शुल्क तिरेर भर्ना हुनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नु हो, चिकित्सकको काम बिरामीको उपचार होइन, अराजकता निम्त्याउनु हो । विनाअनुमति विदेश हिँडेर ठूलो कुरा गर्ने उपकुलपति कोइरालाको अभियान विधिको शासनको खिल्ली उडाउनु हो । अराजकता निम्त्याउनु हो । यी सबै काम अधिनायकवादको नारा दिएर विदेशी फन्डिङमा भइरहेको छ ।
सत्ता सम्हालेको छोटो समयमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आफ्नो नारामा दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनलाई सहमत गराए । निर्वाचनताका जनतासामु गरिएको वाचा कबोल र घोषणापत्रअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेसन फस्टको नीतिलाई यथार्थमा परिणत गराउन छिमेकीसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै सबैसँग सहकार्य गर्दै मुलुकको विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिए । यसबीचमा भारत र चीन भ्रमण गरी पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा सम्बन्ध बलियो बनाउने सफलता प्राप्त गरे । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सुधारसँगै ओली सरकारले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न देशभित्रै सुधारका ठोस योजना पनि अघि बढायो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लामो समयदेखि सत्ताको आडमा भइरहेको संगठित तस्करीविरुद्ध धावा बोल्यो ।
थुप्रै प्रतिष्ठित व्यक्ति वा घराना तस्करीमा संलग्नता रहेको तथ्य उजागर भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अघि बढाएको तस्करीविरुद्धको अभियान अन्तिम अवस्थामा पुग्दा धेरैको कर्तुत खुल्ने अवस्था छ । यो काम अझै जारी छ । संभवतः राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका हेभिवेटसम्म तानिने अवस्था गृहको अनुसन्धानले देखाइरहेको छ । ओली सरकारले नै यातायात क्षेत्रमा कायम रहेको सिन्डिकेट तोडेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै योजनामा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिएको तथ्य सबैसामु छर्लंग छ । विदेश भ्रमणका नाममा राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम बन्द गर्दै औचित्यको आधारमा मात्रै विदेश भ्रमणको नीति लागू भएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरीभित्रको बढुवा अघि बढेको छ ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको अधिकार एउटा व्यक्तिमा सीमित रहनुपर्ने भन्दै सरकारी भत्ता खाएर डा. गोविन्द केसी आन्दोलनमा छन् । उनको माग जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि केही होइनन्, सबै आफै हो भन्ने रहेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको अर्थाेपेडिकमा कार्यरत डा. केसीले बिरामीको शल्यक्रिया गर्दा ढाँड नै नचल्ने बनाएजस्तै देश नै चल्न नसक्ने गरी अपाहिज बनाउने विदेशीको ग्य्रान्डडिजाइनमा फसेका छन् ।
आफूमाथि कुनै कानुन, अस्पतालको नियम नलाग्ने स्वघोषणा डा. केसीले गरिसकेका छन्, बिदा फारमसमेत नभरी अस्पतालको काम छाडेर । उनलाई नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाएर करोडौँ कमाउने कन्सल्ट्यान्सीका मालिक र विदेशी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले राम्रो लगानी गरिरहेका छन् । नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भन्नुको अर्थ विदेशमा गएर नेपालभन्दा दोब्बर महँगोमा पढ, गरिबका छोराछोरी डाक्टर नपढ, धनीकै छोराछोरी मात्रै पढेर गरिबमाथि शासन गर भन्ने नै हो । तर, ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भइरहेछ नेपालमा यतिवेला ।
भारतदेखि अन्य मुलुकका थुपै कलेजमा भिजिटर प्रोफेसरको रूपमा जाने गरेका डा. केसीलाई तिनै कलेजका लगानीकर्ताले नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने हतियार बनाइरहेका छन् । यो तथ्य चिकित्सकहरूले बुझेका छन् तर उनीहरू नेपाल समृद्ध भयो र सबै गरिब नेपाली धनी भए भने आफूहरूको हैसियत खस्कने डरलाग्दो रोगको सिकार भइरहेका छन् । आफ्नो काम नगर्ने तर अन्ततिर आँखा लगाएर जनताको हितमा हुने काम पनि गर्न नदिने शैली अहिले लोकतन्त्रको नाममा भइरहेको छ । नेपाल बन्न नदिन विदेशीले अहिलेसम्म नेपाली दासलाई नै प्रयोग गरिरहेका छन् । यतिवेला पनि तिनै दासहरू विदेशीको इसारामा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् ।
सतहमा जे–जे विषय उठाइए पनि नेपालको समृद्धि रोक्नका लागि डा. केसी प्रयोग भइरहेका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई सरकारको आदेशविपरीत क्यानडा जान लाग्दा रोकिएको विषयदेखि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको सरुवा गर्न हुन्न भन्ने वकालत मुलतः कानुनअनुसार चल्ने र चलाउने कुरा स्वीकार्य छैन भन्ने नै हो । नेपालको कानुन होइन, म (व्यक्ति, जो पञ्चायत, बहुदल सबै कालमा देश र जनता लुटन माहिर छ) जे चाहन्छु, त्यही हुनुपर्छ भन्ने अराजकता निम्त्याउने अभियान अघि बढाइएको छ । त्यो पनि सरकारलाई अधिनायकवादीको आरोप लगाएर । देश सरकारले होइन, अराजक, डन, माफियाले चलाउनुपर्छ भन्ने यो मान्यताको वकालत नेपाली कांग्रेस नै गरिरहेको छ ।
व्यावसायिक पत्रकारिताको दुहाई दिएर नथाक्ने पत्रकारिता जगतकै अगुवाहरू गरिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिरामीको सेवा गर्न छाडेर विनाकाम जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता बुझ्ने डा. केसीलाई अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्र अस्पतालमा आन्दोलन गरी बिरामीलाई मुत्युवरण गर्न बाध्य पार्न दिनुपर्छ । डा. केसीले उपचार होइन, मृत्युको मुखमा पु¥याउने अपराधपूर्ण काम गर्न पाउनुपर्छ । उपकुलपति कुलपतिलाई जानकारी नै नदिई आफूखुसी विदेश जान पाउनुपर्छ, विश्वविद्यालयको ऐन, कानुन, नीतिनियम केही हेरिनु हुन्न, बिदा स्वीकृति गरिएको छ कि छैन, त्यो पनि हेरिनु हुन्न, उनलाई बेलगाम जान दिनुपर्छ, किनकी कम्युनिस्ट सरकारले जसले जे अपराध गर्छ चुपचाप सहीछाप गरिदिनुपर्छ । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र, वौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी सबैले मेरो अधिकार प्रयोग गरी अरूको अधिकार खोस्न पाउनुपर्छ भन्ने मत जाहेर गरिरहेका छन् ।
राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा महाराजको जय होस् भन्दै कुर्लने सामन्तहरू सबैभन्दा बढी यस मुद्दामा अग्रसर छन् । रुख छाप लिएर चुनाव लडेका तर जनताले धुलो चटाएका हरूवाहरूको नेतृत्व देखिन्छ । जसलाई बोलीपिच्छेको डलर बगाउने काम नेपालमा रहेका विदेशी एजेन्सीहरूले गरिरहेका छन् । अमेरिकी फन्डिङ रहेको एक संस्थाले होटल सांग्रिलामा गरेको ‘सरकारविरुद्धको विशेष भेला’ पछि एकाएक यो बिजनेस मौलाएको छ । सांग्रिलामा बोलाइएका ती विदेशीको एजेन्टहरूले निष्कर्ष निकाले, ‘अब सरकारले जे काम गरे पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगायो, अधिनायकवाद आयो भन्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ यो निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि अहिले थुप्रै संस्थाले फन्डिङ गरिरहेका छन् ।
सम्पादकको जागिर गुमेपछि विदेशीकै सेवा गरेर विलासीपूर्ण जीविकोपार्जन गर्दै आएका ब्रोडसेटका सम्पादक पनि उनीहरूकै निष्कर्षका आधारमा सम्पादकीय र समाचार लेखिरहेका छन्, व्यावसायिकताको हवाला दिएर । कस्तो बिडम्बना । यो त देशिविरुद्धकै गद्दारी भएन र सम्पादक महोदय ? अनि ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भएन र ? मैले जे गर्छु, जे भन्छु, त्यही मान्नुपर्छ, तिमी सरकारमा रहेकाको कुरा मान्दिनँ, कानुन, विधिविधान केही मलाई मान्य हुन्न भन्ने वकालत कतातिरको यात्रा हो ? यो अधिनायकवादतर्फकै यात्रा होइन र ? अहिले नागरिक अधिकारको नाममा जे जस्ता अराजकताको पक्षपोषण भइरहेको छ, त्यसको एउटै उद्देश्य रहेको छ, ‘समृद्धितर्फको यात्रामा पूर्णविराम लगाउने ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र चीन भ्रमणमा आफ्नो त्यो योजनामा सहमति कायम गराएलगत्तै भएको सरकारविरोधी आक्रमण यसैको प्रमाण हो ।
समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को सपना साकार पार्न सरकारले काम अघि बढाएरहेकै वेला एकाध घटनालाई लिएर सरकारको काममा चौतर्फी आलोचना र आक्रमण सुरु भएको छ । समृद्धिको सपना रोक्ने ग्य्रान्ड डिजाइनमा रहेका सामन्तहरूको योजनामा यी सबै काम भइरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा कानुन मान्नु पर्दैन, विधिको शासन कायम हुनुहुन्न, जसले जे गर्छ, त्यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकोले चुपचाप सहेर बस्नुपर्छ, सरकार वा जनताले भनेको होइन, एकाध व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने काम मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने डरलाग्दो सोचको विकास भइरहेको छ । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन होस् वा अरू कुनै घटना, सबैले विधिको शासन होइन, देशलाई बर्बादीतिर लैजाने अराजकताको माग भइरहेको छ ।
अहिले ओली सरकारविरुद्ध अघि सारिएका नाराहरू वा योजनाहरू विदेशीको ग्य्रान्डडिजाइनमा भइरहेको छ । अमेरिकी फन्डिङका काठमाडौंको सांग्रिला होटलमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमपछि सरकारविरुद्ध जेहाद छेडिएको घटनाबाट नेपालको समृद्धि रोक्न पश्चिमा शक्तिहरू कसरी परिचालित भएका छन् ? उनीहरू नेपालमै रहेका आफ्ना दासहरूलाई कसरी परिचालित गर्दैछन् भन्ने तथ्य पनि खोलेको छ । रूपमा जे जस्ता नारा वा अडान देखाइए पनि सारमा प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ को अभियान रोक्नु नै हो । यसतर्फ सच्चा नेपालीले सोच्ने मात्रै होइन, प्रतिवाद गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
नेपालमा विद्यार्थी भर्ना हुनेवेला डा. गोविन्द केसी आन्दोलन गर्छन् । उनको आन्दोलन नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउनेका लागि मात्रै हो । कुलपतिलाई जानकारी नै नदिई उपकुलपति विदेश उड्न खोज्छन्, रोक्दा सरकार अधिनायकवादी भयो, मानवअधिकारविरोधी भयो भन्दै प्रचार गरिन्छ । यो संविधान, कानुनमा जे भए पनि म मान्दिनँ, किनकि म जन्मँदै जनतामाथि राज गर्ने सामन्ती सोचको वकालतकर्ता कोइराला कांग्रेस हुँ भन्ने घोषणा हो । यी सबै विषयलाई अब ढिला नगरी समीक्षा र आम नागरिकको पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ । जसको आभाष प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै होइन, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि गरेको छ ।
अब सरकार र सत्तारूढ नेकपाका सबै नेताहरू आलोचना र आक्रमणको जडसम्म पुगेर विश्लेषण गर्ने, काममा कमीकमजोरी भए सच्याएर बाटो बदल्ने, जनतामा सत्ता परिवर्तन भएको अनुभूति दिने, सरकारी सेवा आमनागरिकसम्म पु¥याउने निष्कर्षका साथ अघि बढनुपर्छ । राम्रो काम गर्दा माफियाकरण र विदेशीको हन्डीमा रमाउनेहरूलाई कामले जवाफ दिँदै सत्ता परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन कहीँ कतै चुक्नुहुन्न ।सौर्य दैनिक
बामदेवको चाहनाले मात्रै हुन्न, उपचुनाव गराएर सांसद बन्ने च्याप्टर क्लोज भइसक्यो : प्रचण्ड
प्रदेश—५ ले ल्यायो समृद्ध प्रदेश बनाउने पाँच वर्षिय योजना, प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार डलर बनाउने लक्ष्य